Fitaovana amin'ny antsipiriany momba ny fiara, fanasana fiara tsy misy Touch, vokatra fikarakarana fiara - OPS
Famarotana fiara fitaterana fiara
Ambongadiny, savony, vovoka, ny savony, ny savony
Fanomezana fiara-mpifaninana ara-tontolo iainana, mahomby amin'ny vidiny, kojakoja fanasana fiara, ranon-drivotra Windshield Wiper mandritra ny fotoana rehetra.
Mitady kalitao, sarobidy mahaleotena mahaleotena?
MOMBA NY PRODUCTS
Vokatra fanasana fiara tsy misy taratra
Fahombiazana avo lenta Vovoka fanasana fiara tsy misy kasika,
Tsy mila fanasana mialoha sy fanasana spons, vokany fanadiovana mahery vaika. Mitsitsia rano, fotoana ary vidiny. Aza soratana mandritra ny asa fanasana fiara. Ampitomboy ny famirapiratan'ny fiara.
Sasao, azo hanina alaina haingana ny vovoka. Tena tsotra sy mora ary mora simba. Ampitomboy ny mason-koditra tsy misy fotony, tsy misy dikany ary hafa ny kodiarana kodiarana, hamerina azy amin'ny gloss tany am-boalohany! Azo ampiasaina amin'ny sehatr'asa mitovitovy amin'ny kodiarana.
Azo havadika ho ranomamy fanasan-drivotra mahavariana izy io, tena lafo be ny vidiny ary tena tsara
fanasitranana madio amin'ny fifangaroana amin'ny shampoo-na akanjo savony! Tsy mahavonjy afa-tsy ny fitaterana entana, fa koa mampihena ny fividianana fako.
Mampiasa ny angovo voajanahary sy ekolojika hitrandraka menaka citrus izay zavamaniry biodegradable Ny tanjona madio rehetra tsy misy sisan-javatra, dia mihatra amin'ny fiara, tontolo iainana anatiny, miaraka amin'ny fiasan'ny fanamorana, ny bakteria ary ny mitondra rivotra madio.
1PC Windshield Washer Tablet mitovy amin'ny ranoka wiper 4L! Miala haingana izy io, mamokatra ranon-dronoson-tora-pasika an-trano, haingana sy mahomby amin'ny famongorana horonantsary solika, shellac ary latex hazo amin'ny fitaratra. Mora tehirizina ho anao ny fitehirizana toerana.
Biolojika mahery vaika fanadiovana tanteraka. Tsy vitan'ny akanjo fitafy ihany koa izy io, fa miasa ho toy ny mpangalatra matevina amin'ny fitaovana keky, kitay hazo, kilaometatra, efitra fandroana sns. Hividy mivantana avy amin'ny mpanamboatra, ary manome antoka ny entana voamarina.
Oay manala fofom-borona OPS avy hatrany esory ny fofona rehetra avy amin'ny fisotron'ny fiara, biby fiompy, fofona sigara, mandoa, diaper, fako. Elaela no manala ny fofona rehetra misy, sy ny freshens mba hisorohana ny fipoahan'ny fofona. 100% voajanahary, vokatra azo avy amin'ny fitsaboana voajanahary, fomba tsy misy poizina, azo antoka ampiasaina amin'ny hoditra.
Wholesales mitsimbadika wipes bluk. Ny famaohana azo ampiharina dia afaka manadio ny tananao ary mitazona ny birao na ny fitaovana amin'ny toe-javatra tsara indrindra. Ny vatosoa 99% no novonoina ary somary nesorina. Milamina azo antoka alohan'ny sakafo sy hisotro. Miaro coronavirus!
500ML Gel mpanadio tanana
Gel sanitizer ambongadiny amin'ny maodely samihafa, 50ML, 100ML, 500ML, 1L. Namboarina tamin'ny etanol hanatsarana ny fahasalaman'ny hoditra sy ny fahadiovany, misy moisturizer ary manankarena amin'ny aloe, manitra malefaka. Ireo akora malefaka azo antoka azo ampiasaina matetika. Ataovy foana ny tànana madio sy fahasalamana ho an'ny ankohonanao!
OPS isika. Manamboatra fitaovana fanadiovana fiara tsara indrindra, fitaovana fanadiovana an-trano.
Ny vokatray rehetra dia eco-friendly, degradable, tsy mitondra voka-dratsy ho an'ny fahasalamana! Azontsika atao koa ny mampifanaraka ny vokatra ho an'ny mpanjifantsika.
Zhejiang OPS Environmental Protection Technology Co., Ltd. dia orinasam-teknolojia avo lenta izay R & D matihanina, famokarana sy fivarotana vokatra fanasana fiara, fiara manome tsipiriany momba ny famatsian-tsakafo, ranon-tsoka wiper Windshield, setroka, Famonon-tsofina amin'ny alikaola amin'ny alikaola, Vokatra metallurgie tontolo iainana, gel sanitizer tanana, vokatra ara-pahasalamana sy fikolokoloana tsara tarehy.
Isika dia manana zon'ny fananana ara-tsaina mahaleo tena, Fikarohana ary fampandrosoana ary ny famokarana automatique, hery fikarohana fikarohana siantifika. Ny marika OPS marika solo-pandroana fiara efa ampamoaka dia ampiharina amin'ny fanadiovana fiara avy amin'ny fivarotana fiara maro samihafa, serivisy serivisy fiara ary fivarotana tsara tarehy. Tongasoa eto amin'ny alàlan'ny vistit ny orinasa kami ary ampidiro ireo vokatra ireo!
Nahazo ny vovo-fanasan-damba tsy misy fotony aho, ampiasaina amin'ny alàlan'ny fiasan-tsakafo fanadiovana auto.Itaka minitra 3 isaky ny misakafo ary manao asa tena tsara. Mampiasa ny vokatra aho amin'izao fotoana izao. Vonjeo ny rano,
Atsaharo ny fandaniana amin'ny asa, Tiavo izany !!
Ny vokatra tsara dia tsara, ny biodegradable Auto detailing supplies, anao fiarakodia avy hatrany aorian'ny fanasana, OPS tsy handao ny toerana misy rano. Tena mora ny miasa!
Manadio amin'ny fomba mahatalanjona amin'ny lamba, lamba, fitaovana, fitaovana fikarakarana sakafo, vinaingitra vinyl amin'ny fiara ary zavatra vitsivitsy hafa. Nesoriny daholo ny maloto rehetra izay tsy vitako. Fa izao no vokatra tsara indrindra azoko. Tsy misy fofona, tsy mandoro ao amin'ny hoditra, ampiasaiko tsy misy fonon-tanana. Tena vokatra tsara sy mora!
Fanontaniana Write Us!
Tsia, 1010, Building Building, Wanda Piazza, Taizhou, Zhejiang, Sina.
Azafady mba porofoy fa olona ianao amin'ny fisafidianana ny Key.